Halqara baafatichaa kan wanta filatamee baniitii, Jijjiirii - Gara 3D filadhu.
Wantichii filatammee dura gara rogaattii jijjirama, kana booda immoo gara g-3ttii jijjirama.
Tuutee gara g-3 ttii jijjiirun sadarkaa tartiiba tokkoon tokkoon wantotaa hin jijjiruu dhiibi.
Surxiqqoo fi saxaxxoo vektarii muraa faayoo dabalee, gara wantoota g-3 jijjiruu dandessa. LibreOffice `n surxiqqoowwan akka reektangilii fi saxaxxoo vektarii ta`anii yemmuu gara g-3 jijjiramman akka tuutee rogaaddeettii fudhata.
Wantootnii fakkefamanii barrefama qaban illee jijjiramuu danda`uu.
Yoo barbaddee Galtee g-3 wantiicha jijjiramettii fayadamuu dandessa.
Title is: Garag-3 jijjirii